Gargaar News | Isbedelka Jadwalka Doorashada sanadka 2016-ka oo la shaaciyey.
Posted on September 26, 2016 by Laylo Mahamud	Isbedelka Jadwalka Doorashada sanadka 2016-ka oo la shaaciyey.
Isbedelka Jawdalka Doorashooyinka 2016 ku yimid oo la shaaciyey – WARSAXAAFEED.
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashayooyinka Dadban (GFHDD) ayaa maanta oo Isniin ah soo saarey war-saxaafadeed ay uga hadlayaan isbeddelka ku yimid Jadwalka Doorasshada 2016, waxaana kamid ah waxyaabaha is-bedalka lagu samaynaayo Maalinta doorashada Madaxweynaha in ay noqoto maalinta u danbeysa bisha Nofeember. hoos ka akhri warsaxaafadeedkii ay maanta soo saareen
Warsaxaafadeed ay wadajir u soo saareen Guddiyadda Doorashooyinka ee 2016
Maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka Sebtember 2016, waxaa la soo gabagabeeyey shir saddex (3) maalmood u socday Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashayooyinka Dadban (GFHDD) iyo Guddoomiyayaasha Guddiyada Dawlad Gobaleedyada Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GDGHDD), shirkaas oo looga wada tashanayey arrimaha doorashooyinka isla mar ahaantaasna lagu sameynayey qiimeyn ku saleysan xaqiiqda ka jirta deegaan doorashooyinka sida, horumarka la sameeyey, caqabadaha soo baxay intii hawsha lagu guda jiray iyo waqtiga loo baahan yahay in lagu dhammaystiro hawlaha dhimman.
Horumarka la gaaray
Hirgelinta qorshaha geeddi socodka doorashooyinka 2016 ka wuxuu sameeyeey horumar la taaban karo. Guddiyada Dawlad Gobaleedyada Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GDGHDD) waxay hadda ku guda jiraan dabagalka soo gudbinta liisaska ergooyinka doorashada ee xarumaha dawlad goboleedyada jira iyo kuwa dhismi doona. Waxaa socda soo dhammeystirka liisaska ergada, sidoo kale waxaa la diyaariyey goobihii cod bixinta.
Caqabadaha soo baxay intii shaqadu socotay
In kastoo horumar baaxad leh laga gaaray arrimaha doorashooyinka waxaa muuqata in shaqooyinka qaarkood aysan ku qabsoomi karin jadwalkii shaqo ee loo qorsheeyey sabababo ay ka mid yihiin caqabado isugu jira arrimo siyaasadeed, amni, maamulidda miisaaniyadda doorashooyinka, guddiga xallinta khilaafaadka oo aan weli shaqo galin iyo madax dhaqameedyada oo aan weli soo dhammeystirin liisaska ergooyinka. Sidoo kale, dib u dhac ayaa ku yimid dhismaha xubnaha Aqalka Sare kaas oo caqabad ku noqday soo gudbinta liisaska ergooyinka Golaha Shacabka maadaama uu saamaynayo qaybsiga kuraasta ee beelaha.
Arrimaha Hiiraan/Shabellaha Dhexe
GFHDD iyo GDGHDD ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxay isugu yeereen madax dhaqameedyada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ugu jira 135 ta madax dhaqameed si ay ugala tashadaan goobta doorasha ee labada gobol. Wada hadal dheer kadib, 16 ka mid ah 18ka madax dhaqameed ee labada gobol waxay isku raaceen in doorashada labadaas gobol ay ka dhacdo caasimadda Muqdisho. GFHDD isagoo tixgelinaya go’aanka odayaasha waxay soo dhaweeyeen is afgaradka odayaasha labada gobol ee ku taariikheysan 25/09/16.
GFHDD markii ay la tashadeen GDGHDD ee Soomaliland ayna dhageysteen caqabadaha jira ee ka hortaagan qabsoomidda dooroshooyinka Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka, waxey codsanayaan in si deg deg ah xal looga gaaro caqabadaha siyaasadeed ee horyaala Soomaaliland si ay uga qeyb qaadato geeddi socodka doorashooyinka 2016 ka loona ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dalka.
Go’aammada laga gaaray Jadwalka Doorashooyinka 2016:
In si dhaqso ah loo geeyo ciidamo AMISOM ah xarunta doorashada Dowlad- Goboleedka Galmudug ee Cadaado si loo sugo amniga doorashada ee 2016 ka;
In Madaxda Dowlad Goboleedyada soo gudbiyaan xubnaha musharraxiinta Aqalka Sare ugu danbeyn 5 ta bisha Oktoobar 2016;
In Guddiga Xallinta Khilaafaadka hawlgalo 8 da Oktoobar;
In liiska magacyada ergada doorashooyinka ee Golaha Shacabka la soo dhammeystiro ugu dambeyn 10 ka bisha Oktoobar;
In doorashada Golaha Shacabka la qabto inta u dhaxeyso Oktoobar 23-10 ka Nofeembar ee sannadka 2016ka. Kursi kasta oo ergadiisa diyaar noqota doorashadiisa way dhacaysaa markii la gaaro wakhtiga loo asteeyey doorashada Golaha Shacabka ee Barlaamaanka;
In doorashada Guddoonka labada aqal ee Baarlamaanka cusub la qabto 23 ka bisha Nofeembar;
In doorashada Madaxweynaha ay dhici doonto 30 ka bisha Nofeember ee 2016.
GFHDD waxuu u mahad celinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed dulqaadka iyo taageerada joogtada ah ay la garab taagan yihiin guddiyada ku hawlan geeddi socodka hannaanka doorashooyinka dadban ee 2016 ka.
Waxaan sidoo kale u mahad celineynaa saaxiibada beesha caalamka oo taageero maaliyadeed iyo mid farsamaba ka gaystay hirgelinta doorashooyinka dadban ee 2016 ka.
Warar	Post navigation